Ishaye khona iChelsea ilanda uTuchel - Impempe
Ishaye khona iChelsea ilanda uTuchel
Baningi abazongivumela ukuthi kuthanda ukucanula impela ukuthi umuntu obunobudlelwane naye akulaxaze ngoba ekhala ngezinto ezithile kuwena, kuyabe uyabona usezwana nenqaba nje yomuntu, obheda kakhulu kunawe.
Phela uvele uzibuze ukuthi ngaliwa nje kanti kwakuphendlelwa into enje indawo. Uvele ubone ukuthi lo owake wahlobana naye uyakweya uma ubukisisa amaxhokoveyana asuke esethandana nawo.
Kodwa angithi phela kuyaye kuthiwe incwadi awuyibuki ingaphandle layo bese uthatha isinqumo ukuthi linjani ingaphakathi layo. Nokho owami umbono uthi, njengoba ngifisa ukubhala incwadi ngelinye ilanga, ingaphandle layo kumele lihehe, lithi ngithenge ungifunde. Bese okufica ngaphakathi kube wulozolo lodwa.
Umqeqeshi weChelsea uThomas Tuchel
Kaningi abaphathi bamaqembu bexosha abaqeqeshi ngoba bethi abenzi kahle emaqenjini abo. Bese kwesinye isikhathi umangale uma ubona umqeqeshi osuke ezovala isikhala salo osuke exoshiwe. Uthole ukuthi uma kukhulunywa ngamava, ubuhlakani nokuyazi into umuntu asuke ekhuluma ngayo, lo osuke ezovala isikhala akaliboni elidlalayo kulo osuke exoshiwe.
Okumele sikwazi ukuthi kwesinye isikhathi izinto zike zingahambi kahle eqenjini hhayi ngoba inkinga ikumqeqeshi. Uthole ukuthi abadlali sebehudula izinyawo ngoba nakhu umqeqeshi akezwani nento engasile, ufuna abadlali baziphathise kwabantu abadlala ibhola elikhokhelayo. Sebezodlala umbhedoke ngabomu enkundleni ukuze ijazi ligcwale umoya kumqeqeshi.
Namuhla ngithi angishayele ihlombe abaphathi beChelsea FC, yase-England, ngokukhetha kwabo umqeqeshi osekusheshe kwacaca ukuthi iqembu ufuna lidlale kanjani. Angifuni ukukhuluma ngiziphikisa, ngakho ngizosheshe ngicacise ukuthi angazi noma abadlali bese bengamfuni yini uFrank Lampard, osanda kuxoshwa kwiBlues of London.
Nokho kucacela ngisho ingane esakhasa ukuthi uThomas “TT” Tuchel, othathe izintambo kuLampard, uyalazi ngempela ibhola. Lokhu ngikusho ngoba kunabadlali abebengadlali njalo ngaphansi kukaLampard, abafana noMarcos Alonso, abashelelayo manje ngenxa yebhola elifike noTT.
Emidlalweni eyisishiyagalombili edlalwe yiChelsea selokhu kufike uTT ayikashaywa, futhi kuyacaca ukuthi ibhola elidlalayo libheke kuphi. Emdlalweni we-Uefa Champions League, iChelsea ibhekene ne-Atletico Madrid ekuhambeni ngoLwesibili, ivele yavuka indlobane, yalimpintshela ekhoneni leli qembu laseSpain. Empeleni lo mdlalo ophele ngo 1-0 kuwina iChelsea, bekumele uphele leli qembu laseLondon selihlohle inqwaba yamagoli.
Ngicabanga ukuthi nomqeqeshi weMadrid, uDiego Simeone, ubengalindele ukuthi iChelsea izobagagazisa ngaleya ndlela enkundleni yabo. Akwaziwa ukuthi kuzofike kube njani eLondon emlenzeni wesibili njengoba kucaca ukuthi uTT usefike nesinongo esingcono kwiChelsea.
UMarcos Alonso weChelsea
Isifundo okumele sithathwe abaphathi bamaqembu lapha ukuthi umqeqeshi osuke ezovala isikhala somunye kumele kube yilo ozofika noshintsho. Angivamisile ukuncoma uSiviwe “Chippa” Mpengesi ongumphathi weChippa United kodwa kulokhu ukuxosha kwakhe uLehlohonolo Seema, wase elanda uDan Malesela kubukeka kuthela izithelo ezinhle.
Phela uMpengesi uyathanda ukuvele axoshe nje, sengathi wumdlalo omenza esase ukukhomba abaqeqeshi abeza ngayo. Nokho uMalesela ufike kwacaca kulokhu kwiChilli Boys, yize naye ekade ayexoshwa kuleli qembu.
Njengamanje abaningi babona sengathi ukuxoshwa kuka-Ernst Middendorp kwiKaizer Chiefs, bese kulandwa uGavin Hunt, akubanga umqondo omuhle. Phela isibhaxu sikhala phansi phezulu kuMakhosi selokhu kufike uHunt, futhi bakhona abalandeli ababona sengathi kumele axoshwe.
Mhlawumbeke umfo kaHunt, uma ukhuluma naye ngalokhu, angazithethelela ngokuthi akakwazanga ukuthola abadlali abebebadinga ukuqinisa iqembu, ngenxa yesigwebo ebesibhekene neChiefs. Nokho njengamanje kubukeka kungahambi neze kahle, futhi bekungcono kakhulu kukhona uMazinyo.
Kuyohlale kuyinto ecanulayo ukuthi umuntu akwale bese umbone esethandana nentothoviyane nje, osuke uzibona ungcono kunayo. Kufana nokusuka endlini esile uyohlala emkhukhwini, ungaxoshwanga muntu. Abaphathi bamaqembu nabo abakuqaphele lokhu, bese bebheka nokuthi yini esuke iza nomqeqeshi omusha. SHWIII
Ezakamuva, Ibhola lomhlaba, Ingosi
Previous Previous post: Uchitha eyokuthutha isizinda seCAF uMotsepe
Next Next post: Amancoko yiwo aletha injabulo nempumelelo kwiSundowns – Zwane